Kazakhstan : Mandamina ny adiny ny vinantolahy taloha an’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2018 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Français, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Mikikitra amin'ny fanamboarana endrika ”demokraty” amin'ny famoahana vaovao manala baraka ireo manamboninahitra ambony ao amin'ny firenena i Rakhat Aliev, vinantolahy taloha an'ny Filoha, masoivoho taloha an'i Kazakhstan tao Aotrisy, isan'ireo kazakh olombitsy nanjaka fahiny, voampanga 40 taona an-tranomaizina tamin'ny fitsarana natrehany noho ny raharaha fakàna an-keriny, heloka bevava niaraka tamin'ny andian-jiolahy ary andrana fanonganam-panjakana,
Tamin'ny herinandro lasa teo, navoaka ny bokiny The godfather in law (ilay mpiantoka tsara). Nivoaka tao Alemaina ary tamin'ny teny alemà ny famoahana voalohany. Araka ireo tenin'i Rakhat Aliev tao amin'ny blaoginy [rosiana]:
Zavatra vitsy ihany no fantatr'i Eoropa amin'izay zavatra mtranga ao Kazakhstan. Mamela ireo mpitondra ao amin'ny Firaisambe Eoropeana mba ho mody fanina tsy hahita ny famoretana sy ireo fanohintohinana ny zon'olombelona izany.
Tsy nanintona afa tsy fanehoankevitra vitsy ity lahatsoratra ity. Faly amin'ny famoahana azy io ny sasany. Mampanantena i heil-jonny fa hidivy ilay boky ary manolotra ny tolotra fandikanteny avy aminy i mimi7777777 .
Kaodikaody i yeresim [rosiana]:
Mety ho hafa no nandraisako ity boky ity raha toa ka mpanohitra ny fitondrana azo itokisana ilay mpanoratra. Fa ianao – noho ny rafozanao no naha-toy izao anao. Ary ankehitriny, misora-tena ho toy ny demokraty ianao mba ampiasàna zava-misy manala baraka hanoherana io rangahy io. Dia tena bado tahaka ny inona ve ianao no hino fa ho faly ny hahita anao indray ny Kazakh? Tsy mino an'izany aho. Ary izay no fahorianao.
Mamaritra tsara ny teniny i thousand_pa [rosiana]:
Tantarain'ilay boky ho an'ny mpamaky ve ny fomba nahazoan'ny lehilahy iray teo amin'ny Fitondrana an'ireo orinasa lehibe, ho lasa tompon'ny Nurbank [banky], vondrona haino aman-jery sy dokambarotra ary tompona petrabola aminà orinasa kazakh sy vahiny maro isankarazany?
Tokony homarihina : taorian'ny fanamarinana, blaogera tsy tena izy avokoa ny ankamaroan'ireo blaogera namela fanehoankevitra tao amin'ny blaogin'i Aliev, izay tsy mbola namoaka na inona na inona tao amin'ny kaontiny mihitsy raha tsy hoe teny kely ao amin'ny mombamomba azy angaha.
Navoaka tao amin'ny neweurasia ihany koa.
Afganistana 4 herinandro izay